‘लेखकले जहिल्यै दुःख रोज्छ’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
साहित्यकार सरुभक्तको सातौं उपन्यास आएको छ, ‘प्रतिगन्ध’ । प्रवासी जीवनको कथा बोकेको यो उपन्यास उनकै मदन पुरस्कार विजेता उपन्यास ‘पागल बस्ती’ बाट कति भिन्न छ ? समकालीन आख्यान लेखन, निजी अनुभव र पाठक प्रतिक्रिया के कस्ता छन् ? यसै सेरोफेरोमा रहेर उनीसँग राजकुमार बानियाँले गरेको कुराकानी :
नेपाली साहित्य उपन्यासको उरुङ्गोमाथि उभिएजस्तो देखिएको छ । तिनमा तागत कति छ ?
हिजोआज एक–दुईवटा कथासमेत नलेखी एकैचोटि उपन्यास निकालिरहेको देख्छु । कसरी लेख्न सम्भव हुन्छ ? मैले बुझ्नै सकेको छैन । किनभने उपन्यास लामो साधना र गम्भीर चिन्तनको परिणामबाट लेखिने विधा हो । साधारण हिसाबले कुनै स्तरीय उपन्यास लेख्न सकिँदैन । आख्यानमा यथार्थ र मायिकताका साथै स्वैरकल्पना पनि चाहिन्छ । त्यसो त राम्रा लेख्नेहरू पनि छन् । तिनलाई हतोत्साह हुने गरी पनि कुरा नगरौं । कतिपय लेखकहरू चर्चित पनि भइरहेका छन् । तिनले पनि साँच्चै राम्रो, महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट औपन्यासिक कृति लेख्नु आवश्यक छ । आख्यानकारमा विश्व दृष्टिकोण अनि समय र परिवेशलाई गहनतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गर्ने क्षमता चाहिन्छ । हामीसँग त्यस्ता अजम्बरी, अमर वा महान् साहित्यको टड्कारो अभाव छ ।
केही वर्ष पहिले तपाईंले ‘के मर्दै छन् नेपाली कविता ?’ लेख्नुभएको थियो । उपन्यासचाहिँ सकुशलै छ ?
हामीकहाँ धेरैजसोले सतही उपन्यास लेखिरहेका छन् । कति चर्चित भनिएका उपन्यासकार पनि त्यो अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । सप्पै उपन्यास त मैले पढेको छैन । तर धेरैजसो पढ्ने कोसिस गर्छु । आख्यानप्रति नयाँ पुस्ताको लगाव छ । नारायण वाग्लेभन्दा यता धेरै आख्यानकार जन्मिए । तिनको मूल्यांकनका निम्ति त्यति हतार पनि नगरौं । ‘रूपमती’ को जमानाको उपन्यासले अहिले काम चल्दैन । कम्तीमा अहिलेकै भाषाशैली र अन्तर्दृष्टि पक्रन सक्नुपर्छ । कथा भन्ने शैलीभन्दा पनि त्यो कथा किन भन्न चाहिरहेको छ भन्ने अन्तर्दृष्टि महत्त्वपूर्ण लाग्छ । त्यो खालका लेखकचाहिँ कमी छ तर नयाँ उत्साह
भने देखिन्छ ।
तपाईंको औपन्यासिक यात्रा कति सहज रह्यो ?
मैले बीसको दशकदेखि कविता र नाटक लेख्दै आएँ । आख्यानको क्षेत्रमा चालिसको दशकपछि मात्रै आएँ । आईए, बीएतिर एक–दुई उपन्यास लेख्ने कोसिस गरेँ पनि । त्यो बेलाको मनस्थिति अनुकरणात्मक ज्यादा हुन्थ्यो । आफैंले मूल्यांकन गर्दा पनि राम्रो उपन्यास भएन भन्ने लागिरहन्थ्यो । त्यसैले दुई–तीनवटा उपन्यास अधुरै रहे । कताकता उपन्यासै लेख्न सक्दिनँ कि भन्ने पनि लाग्थ्यो । सायद म उपन्यासका लागि परिपक्व भएको रहेनछु । रंगमञ्चमा लाग्दा म लेखनका साथै चिन्तनतिर आकृष्ट भएँ । अनि मात्र विज्ञानमा आधारित भएर ‘एक अभिनवको आत्मकथा’ लेखें । त्यसको केही वर्षपछि ‘पागल बस्ती’ को रचना गरें ।
‘पागल बस्ती’ पछि थुप्रै उपन्यास लेख्नुभयो । तर, पाठकहरू ‘पागल बस्ती’ मै अड्किरहेजस्तो लाग्दैन ?
हो, हिजोआज धेरैजसो पाठकले ‘पागल बस्ती’ कै कुरा ज्यादा गर्छन् । त्यसपछिका मेरा उपन्यास ‘पागल बस्ती’ जस्तो भएनन् भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् । त्यसलाई म गलत पनि भन्दिनँ । त्यो एउटा सोच हो । पारिजातले ‘शिरीषको फूल’ लेखिन् । पारिजात भनेकै ‘शिरीषको फूल’ भैदियो । मेरा लागि पनि अहिले ‘पागल बस्ती’ भनेकै सरुभक्तजस्तो भएको छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभव के छ भने प्रकाशनलगत्तै मैले धेरै स्वागत पाएको छैन । ‘तरुनी खेती’, ‘समय त्रासदी’, ‘चुली’ आदि उपन्यासको पनि तुरुन्तै स्वागत भएको होइन । ‘तरुनी खेती’ आउँदा एकथरी महिला साहित्यकार मित्रहरूले त यो उपन्यासै भएन, के अभद्र नाम राखेको भन्ने प्रतिक्रियासमेत जनाए । बिस्तारै मैले बुझाएँ । अहिले ‘पागल बस्ती’ तपाईंको चर्चित उपन्यास हो तर शैलीगत र रचनात्मक हिसाबले ‘तरुनी खेती’ प्रिय लाग्छ भन्ने नयाँ पुस्ताका धेरै पाठक भेटिरहेको छु ।
‘समय त्रासदी’ आउँदा तिम्रो उपन्यास पढेर दसैँ बिगारेको छु भन्नेसम्मको प्रतिक्रिया पाएँ । त्यसको विषयवस्तु नै त्यस्तै थियो । हिमालको दुःखकष्टको सापेक्षमा जीवनको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर ‘चुली’ लेखें । यो पनि बिस्तारै ग्राह्य हुँदै गयो । कुनचाहिँ उपन्यास प्रिय हुन्छ/हुँदैन, कुनचाहिँ पाठकको स्मृतिमा पछिसम्म बसिरहन्छ/रहन्न ? त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
तपाईंका उपन्यासले पाठकबाट चाँडै न्यानो स्वागतचाहिँ किन पाउँदैनन् ?
ठ्याक्कै यही कारण भन्ने छैन । मैले जुन प्रकारका विषयवस्तु र शैलीमा उपन्यास ल्याइरहेको छु, त्यसले सामान्य पाठकलाई सुरुमा अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ । हालसालै रारा यात्राका क्रममा एक पाठकले भने, “दाइको ‘पागल बस्ती’ अझै पूरा पढेको छैन ।” ३० वर्षअघि नै प्रकाशित भएको उपन्यासले एकातिर मलाई आख्यानकारका रूपमा चिनायो भने अर्कातिर त्यही पुस्ताका पाठक पढ्न गाह्रो भयो भनिरहेका छन् । मलाई त्यही गजब लाग्छ ।
तपाईंका उपन्यासमा विषयगत विविधता हुनुको कारण के हो ?
‘चुली’ उपन्यासलाई गंकी वसुन्धरा पुरस्कार दिने सभामा समालोचक कृष्णचन्द्रसिंह प्रधानले ठ्याक्कै यही कुरा गरेका थिए, सरुभक्तका उपन्यासमा विविधता छ । ‘एक अभिनवको आत्मकथा’, ‘पागल बस्ती’, ‘तरुनी खेती’, ‘चुली’ मा बेग्लाबेग्लै विषयवस्तु छन् । चाहे आख्यानकार होस् वा अरू काव्यकार, लेखकको सफलता भनेको आफूलाई नदोहोर्‍याउनु हो ।
कतिपय पाठक ‘पागल बस्ती’ जस्तो अर्को उपन्यास लेखिदिओस् भन्ने चाहन्छन् । मलाई थाहा छ, त्यो ‘पागल बस्ती’ को अति प्रेमले भनिएको हो । त्यसमा मलाई सधैं खुसी लाग्छ । तर आख्यानकारका रूपमा ‘पागल बस्ती’ दोहोर्‍याउनुहुन्न भन्ने चेतना ममा छ ।
‘प्रतिगन्ध’ को नामै जटिल भयो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको छ । ‘पागल बस्ती’ आउँदा के भनिएको थियो ?
‘पागल बस्ती’ को सुरुआत एक समयमा गरें, अन्त्य अर्को समयमा । ०३८ मा सुरु गरेको उपन्यास ०४८ मा सकियो । मेरो दिमागमा ‘पागल बस्ती’ को विम्ब त आइरहेको थियो । तर कथावस्तु अघि बढाउन सकिरहेको थिइनँ । युनिभर्सिटी पढ्दा त्यसलाई हेर्दै हेरिनँ । पोखरा फर्केपछि पूरा गरेँ । निकटका मित्र चैतन्य सिटौला प्रकाशकका रूपमा भेटिए । ०४८ मा ‘पागल बस्ती’ लोकार्पण हुँदा पनि खासै चर्चा भएन । डेढ–दुई सय रुपैयाँ थियो मूल्य । पोखराको गोरखापत्र बाजेमा राखेको । नबिकेर बाजेले तीन–चारचोटि मूल्य घटाउनुपर्‍यो भने । मेरा एक–दुई समकालीन भाइहरूले उपन्यासको नामै सस्तो भयो, फेर्नुपर्‍यो पनि भने । मैले उनीहरूलाई सम्झाएँ– के देवकोटा, रिमाललाई पागल भनिएको थिएन र ? कुनै पनि शब्दको प्रयोग कुन रूपमा गरिएको छ, त्यो पो हेर्नुपर्छ त ! अहिले सबैले त्यही नाम रुचाउँछन् । विश्व आतंकवाददेखि नेपाली जातिको संघर्षको कथालाई जोडेर लेखिएको आख्यान भएकाले ‘प्रतिगन्ध’ पनि ढिलोचाँडो मान्छेले रुचाउँछन् भन्ने लाग्छ ।
‘प्रतिगन्ध’ मा त दुःखको सरप्राइज प्याकेज नै छ क्यारे १
पोखराका एक पाठकले मसँग भने, ‘तपाईंले ‘प्रतिगन्ध’ मा लेखेजस्तो डायस्पोराको जीवन दुःखपूर्ण वा विछोडको मात्रै छैन । सुखसयल र प्रगति पनि गरिरहेका छन् ।’ हो, केहीले विदेशमा कुस्त कमाएका पनि छन् । तर, डायस्पोरामा हजारौंहजार मानिसले जसरी जीवन बिताइरहेका छन्, मैले तिनकै बारेमा लेखेको हुँ । सुख र दुःखलाई पक्ष र विपक्षमा बाँड्ने हो भने लेखकले जहिल्यै दुःखको पक्ष लिन्छ । सुखको चर्चाका लागि सरुभक्तले कलम घोटिरहनुपर्छजस्तो पनि लाग्दैन ।
‘मुनामदन’ मा पनि एउटा डायस्पोराकै कथा छ । काव्यको पात्र मदन पनि अहिले मध्यपूर्व वा अमेरिका गएजस्तो भोट गएको थियो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सुखान्त नै गर्न सक्थे । तर दुःखान्त परिवेशले नै जीवनको आयामलाई अभिव्यक्ति गर्छ । परिवार र समाजको भित्री र बाहिरी अवस्थालाई गहनतापूर्वक प्रस्तुत गर्छ । मदनले भोटबाट कमाएर ल्याएर आमा, श्रीमती र दिदीलाई कोसेली/थैली दिने खालको सुखान्त कथा बनाएको भए मार्मिकता आउँदैनथ्यो । डायस्पोरामा बसेको, दुःख पाएको, घर परिवार सम्झेको भन्ने विषयमा त धेरैले लेखिरहेका छन् तर ‘प्रतिगन्ध’ मा मैले फरक किसिमले चरित्र निर्माण गरेको छु ।
उपन्यासमा महिलाहरूलाई अलि खराब देखाइएजस्तो लाग्दैन ?
पहिले पुरुष जति खराब भए पनि महिलालाई सहनशीला सुशीलाका रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो साहित्यमा । ‘प्रतिगन्ध’ मा पुरुषहरू सहनशील अनि महिलाहरू अलिकता उन्मुक्त देखिएजस्तो परिवेश छ । मैले अमरको पक्षबाट उपन्यास लेखें । त्यही भएर आरतीले घर छोडेर जाँदा उसलाई दुःख लागेको बुझियो । मैले आरतीलाई खलपात्रका रूपमा चित्रित गरेको छैन । मैले ‘प्रतिगन्ध’ लेख्दा ठ्याक्कै यस्तै घटना देखेको थिएँ । आफ्नै आँखाले देखेका आरतीजस्तै चरित्रहरू त्यसरी हराएका छन् । म कसैलाई दोस्याउन सक्दिनँ । अमरको ‘प्वाइन्ट अझ भ्यु’ आफ्नै छ, आरतीको आफ्नै । अमरका आँखाले हेर्दा आरती घर भत्याङभुतुङ बनाएर गई भन्ने छ । आरती स्वाभिमानी छे । सानो बच्चाको लालनपालन गरेकी छ तर लोग्ने सँगै बस्न चाहेकी छैन । उमेर पुगेपछि छोरी स्वतन्त्र निर्णय लिने भएकी छे । त्यो असल या खराब के हो ? मैले नारी वा पुरुष कसैको पक्ष लिएको छैन ।
मानिसहरू सपना हराएर विदेश जान्छन् कि सपना देखेर ?
म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाँदा देख्छु– सयौंको संख्यामा फूलमाला लगाएका नेपाली एकदमै अँध्यारो मुख लगाएर बिदा हुन्छन् । परदेसिनु आम नेपालीको बाध्यता हो । मलाई लाग्छ, सबै एउटै सपना देखेर अमेरिका गएका छैनन् । कोही आफ्नो देशमा सपना हराएर अमेरिका भासिएका छन् । मूलभूत प्रश्न डायस्पोरामै हराउने कि देशप्रतिको कर्तव्य र भावना पनि राख्ने भन्ने हो ।
कम्तीमा तपाईंले नयाँ शब्द त दिनुभयो नि ?
म प्रायः नाम आएपछि नै लेख्छु । ‘पागल बस्ती’ र ‘तरुनी खेती’ त्यसैगरी लेखें । कहिलेकाहीँ लेखिसकेपछि पनि नाम छनोटमा महिनौं लाग्छ । ‘चुली’ का बेला दर्जनौं नाम सोचें । एकपटक त उपन्यासभन्दा पनि नामको सूची नै लामो होलाजस्तो भयो । कहिलेकाहीँ अंग्रेजी नाम मात्रै दिमागमा घुस्छ । अंग्रेजी विद्यालयमा पढेको हुनाले नेपालीमा रूपान्तरण गर्नै आउँदैन ।
यसपालि सुरुमा दुई–तीनवटा नाम सोचें । नाम अझै सटीक लागेन । ‘प्रतिगन्ध’ शब्दकोशमा पनि रहेनछ । जटिल हुन्छ कि भन्दाभन्दै पनि यही नाम राखें । पाठकले बुझ्दै जान्छन्, बुझ्दै गएपछि जटिल भए पनि सजिलो हुन्छ । के मधुपर्क जटिल छैन र ?
मान्छेलाई फलानो ढिस्काना भनेर चिन्ने अनुहारले हो, उपन्यासलाई चिनाउने अनुहारचाहिँ नाम हो । तर अनुहार मात्रै सबैथोक पनि होइन । ‘प्रतिगन्ध’ शब्दको अर्थ लगाउन गाह्रो हुन्छ भनेर अमरको बोलीको अन्तिमतिर राखेको छु । मान्छेको स्वाभाविक गन्ध हुन्छ । त्यसको विपरीततर्फ लागेपछि ‘प्रतिगन्ध’ सुरु हुन्छ । त्यसले गर्दा संसारमा पारिवारिकदेखि सामाजिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विग्रह सुरु हुन्छन् । अहिलेका पाठक जागरुक छन् । यस्ता शब्दलाई सहजै बुझ्ने क्षमता राख्छन् ।
अन्त्यमा, अविवाहित सेलिब्रिटीलाई सोधिने प्रश्न तपाईंलाई थाहै छ । हिजोआज बिहे गर भन्ने दबाब छ कि छैन ?
म ६४ वर्ष लागें । बुबाआमा हुँदासम्म त्यस्तो दबाब थियो । हामी मरेपछि तँलाई हेरेर को बस्छ भनेर सम्झाइरहनुहुन्थ्यो । अहिले धेरैले के बुझे भने यसलाई जति सम्झाए पनि काम लाग्दैन । त्यसैले कसैले केही भन्दैन । प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ १०:५४
साँच्चै साकिब जत्तिको खेलाडी किन दीपकजस्ता सट्टेबाजको सम्पर्कमा रहे र त्यसबारे आईसीसीलाई सूचना दिन चुके ?
कार्तिक ३०, २०७६ हिमेश
‘ब्रो एनिथिङ इन दिस सिरिज ?’सन् २०१८ जनवरी २३ मा साकिब अल हसनले ह्वाट्स एपमा यही सन्देश पाएका थिए, दीपक अग्रवालबाट  । अब साकिब को हुन र दीपक कस्ता मान्छे हुन, त्यसमा कुनै रहस्य छैन  ।
साकिब हुन्, विश्व क्रिकेटले देखेका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सफल अलराउन्डरमध्ये एक बंगलादेशी खेलाडी । अनि दीपक हुन्, क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङका लागि दिनरात खटिरहने भारतीय सट्टेबाज । बंगलादेशसँगै श्रीलंका र जिम्बावे सम्मिलित सिरिजबारे दीपक साकिबबारे भित्री कुरा सुन्न चाहन्थे ।
खासमा त्यसको पनि एक वर्षअगाडि नै उनीहरूबीच ह्वाट्स एपबाट कुराकानी सुरु भइसकेको थियो । दीपक साकिबसँग व्यक्तिगत रूपमै भेट्न उत्सुक थिए । त्यही त्रिकोणात्मक सिरिजको एक खेलमा साकिब ‘म्यान अफ द म्याच’ भए । दीपकले त्यसकै लागि साकिबलाई सुरुमा बधाइ दिन चाहे र लेखे, ‘डु वी वर्क इन दिस अर आइ वेट टिल द आईपीएल ?’
अब यो ‘वर्क’ मा पनि कुनै ठूलो रहस्य त पक्कै लुकेको छैन । यसको अर्थ पनि सबै भित्री जानकारी कसरी पाउने हो भन्ने नै हो । पछिल्लो संस्करणको आईपीएल चलिरहेको बेला पनि शाकिबले अर्को सन्देश पाए र त्यसमा खास नामका खेलाडीले खेल्न पाउन छन् कि छैनन् भनेर सोधिएको थियो । दीपक यत्तिकैमा रोकिएनन्, उनले साकिबको बैंक खाताबारे पनि बुझ्न चाहे । उनले बुझ्न चाहेको त्यो बैंक खाता सामान्य खालको थिएन, त्यसले डलरको कारोबार हुनु पर्थ्यो ।
साकिबले ह्वाट्स एपमा दीपकसँग गरेका यी केही कुराकानी मात्र हुन् । उनले अरू यस्तै केही कुराकानी त ‘डिलेट’ गरिसकेका रहेछन् । जति बाँकी रहे, ती भर्खरै बाहिर आएका हुन् । त्यसो त साकिबले दीपकको करकापमा परेर केही लाख डलर कमाउने लोभमा खरावै काम त गरेनन् । त्यसो भनेको उनी सीधासीधा ‘म्याच फिक्सिङ’ तिर त लागेनन् । तर उनले जे जति भएको थियो, त्यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) को एन्टी करप्सन ब्युरोलाई पनि भनेनन् ।
जति बेला यी सबै कुरा बाहिर निस्क्यो, उनी आईसीसीबाट दुई वर्ष प्रतिबन्धमा परे । त्यसमध्ये एक वर्ष उनले क्रिकेटसँग जोडिएर केही पनि गर्न पाउने छैनन् । उनी यसरी प्रतिबन्धमा परेको समाचार त केही दिन पुरानै हो, तर यससँग जोडिएका घटनाक्रम भर्खरै बाहिर निस्कँदै छन् । उनीबारे थरीथरी विचार पनि । अनि केही पूर्वानुमानसमेत । यससँग जोडिएर ठ्याक्कै एउटा खास मत आएको छ र अर्को प्रश्न । पहिला मत ।
पूर्व इग्लिस कप्तान माइकल भनजस्ताले यो मतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । त्यसअनुसार साकिबले लगभग अर्को वर्षभित्र क्रिकेट खेलिसकेका हुनेछन् । यस्तोमा यो कारबाही नरम भएन त ? साकिबलाई त आजीवन प्रतिबन्ध पो लगाउनुपर्ने हो । क्रिकेट सफा हुनुपर्छ, यसमा कसको मात्र विमति हुन्छ र ? तर जसले यही खेललाई धमिलो पार्न खोज्छ, त्यसलाई सकेसम्म कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । खासमा साकिब यस्तै ठूलो सजायबाट बचेकै हुन् ।
सायद साकिब यसपल्ट भाग्यमानी रहेभन्दा हुन्छ । भनले त केसम्म पनि भनेका छन् भने साकिब जत्तिका खेलाडी कारबाहीमा पर्‍यो भनेर मनको कुनै कुनामा सहानुभूति राख्नुपर्ने पनि छैन । अझ भन्न सक्नुपर्छ, साकिबले अब कहिले पनि क्रिकेट खेल्न नपाएकै बेस । जसले क्रिकेटमा ‘फिक्सिङ’ भित्र्याउने प्रयास गर्छ अथवा त्यस्तो कुनै भूमिकासम्ममा पनि सहभागी हुन्छ, त्यो क्रिकेटबाट टाढिएकै राम्रो । किन चाहियो यस्तो मान्छे ?
अब प्रश्न । साँच्चै साकिब जत्तिको खेलाडी किन दीपकजस्ता सट्टेबाजको सम्पर्कमा रहे र त्यसबारे आईसीसीलाई सूचना दिन चुके ? यसको उत्तर साकिबले मात्र दिन सक्छन् । होइन भने उनीजस्तै यसअघि सट्टेबाजको सम्पर्कमा रहेर कारबाही भएका खेलाडीले नै । साकिबले यसबारे धेरै बोलेका छैनन् । बोल्न चाहेका बेला पनि उनलाई चुप लगाइएको छ । बरु हिजैजस्तो समाचार के आएको छ भने उनले ढाकामा कतै फुटबल खेले र त्यसमा फुटबल खेलाडी पनि हुनुको केही झलक देखाए ।
त्यसअगाडि एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले के मुख खोल्ने प्रयास गरे, तत्काल उनलाई त्यही रोकियो । साकिबले खालि यति मात्र दोहराए कि उनले भूल गरेकै हुन्, उनी कारबाहीका लागि योग्य छन् । यसका लागि उनले माफी पनि मागे । यी सबै भनाइ त उनले आईसीसीले जारी गरेको वक्तव्यमै भनिसकेका थिए । तय छ, अबका केही वर्षसम्म साकिबले यसबारे बोल्ने छैनन् । सायद यसका लागि उनले कुनै दिन किताबै लेख्नेछन् ।
सबैको यस विषयमा एकमत के छ भने साकिबसँग जोडिएर जे जति घटना भए, ती सबै ठूलो शिक्षाका रूपमा आएको छ । यसले विश्व क्रिकेटलाई ठूलो पाठ पढाएको छ । जत्तिकै ठूला स्टार खेलाडी किन नहोस्, अथवा भर्खर क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका खेलाडी नै, साकिबले जस्तो काम बिर्सेर पनि गर्नुहुन्न । हुन सक्छ, दीपकजस्ता सट्टेबाजले खेलाडीको नजिक आउने प्रयास गर्नेछ नै । तर यसबारे खेलाडीले तुरन्तै आईसीसीको त्यो एन्टी करस्पन ब्युरोलाई सूचना दिइहाल्नुपर्छ ।
जति बेला उनी आईसीसीको प्रतिबन्धमा परे, त्यति बेला उनी बंगलादेशी टेस्ट टिमका कप्तान थिए । यसअघि उनले इंग्ल्यान्डमा भएको वान डे विश्वकपमा गज्जब प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा उनी एउटै विश्वकपमा छ सय रन बनाउने र १० भन्दा बढी विकेट लिने पहिलो खेलाडी भएका थिए । यो तथ्यांकले पनि देखाउँछ, उनी वास्तवमै कत्तिको खेलाडी हुन् भनेर । सन् २०१४ मा बंगलादेशले ट्वान्टी ट्वान्टी
विश्वकपको आयोजना गर्दा पनि उनले यस्तै नाम कमाइसकेका थिए ।
नेपालले पनि त्यो विश्वकप खेलेको थियो । प्रतियोगिताअगाडि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साकिबलाई पनि केही बोल्न दिइएको थियो । त्यसको अन्त्यतिर नेपाली पत्रकारसँग विशेष रूपमा बोल्ने जिम्मेवारी उनलाई दिइएको थियो । उनी नेपाली पत्रकार बसेको राउन्ड टेबलमा आए र आफ्ना केही अनुभव सुनाए । उनलाई पनि नेपालले त्यो विश्वकप खेलेकोमा खुसी थियो र भनेका थिए, ‘विश्व क्रिकेटमा कुनै दिन नेपाल पनि बलियो टिम हुनेछ ।’ खुबै लज्जालु देखिएका थिए, उनी । शब्दहरू खोजी खोजी बिस्तारै सावधानीपूर्वक बोलिरहेका थिए ।
अहिले यिनै खेलाडी आईसीसीको कारबाहीमा परे, त्यो पनि नचिताएको कारणमा । ठीक यहाँनिर उल्लेख गर्नैपर्ने के पनि हो भने साकिबमाथि कारबाही हुँदा बंगलादेशी क्रिकेट बोर्डलाई भने खुसी नै लागेको छ । यो प्रतिबन्धले बंगलादेशी क्रिकेटमा आउन सक्ने एउटा ठूलो दुर्घटना टरेको छ । भारत जाने टुरअगाडि बंगलादेशी खेलाडी आन्दोलनमा थिए । उनीहरूले धम्की दिइरहेको थियो, बोर्डले तलब र सुविधा बढाउने जस्ता केही माग पूरा नगर्ने हो भने भारत पनि जाने छैन्, टुर नै बहिष्कार हुनेछ ।
अनि खेलाडीको यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए, तिनै साकिबले । ठीक त्यही बेला आईसीसीको पनि निर्णय आयो, साकिबले त बोल्ने ठाउँ नै भएन, अरू खेलाडी चुपचाप भए । सुटुक्क भारत पनि पुगे । यी बंगलादेशी खेलाडी साकिबको अझै ठूला समर्थक भने हुन् र भनिरहेका छन्, ‘त्यो दिन अब धेरै टाढा छैन, जति बेला साकिबले फेरि बंगलादेशका लागि क्रिकेट खेल्नेछन् ।’
त्यति बेला भने साकिब बिर्सेर पनि दीपकसँग सम्पर्कमा आउने छैनन, आए पनि तुरुन्तै आईसीसीलाई झन्नेछन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ १०:५३